एमसीसीबारे प्रधानमन्त्रीलाई आयो जुरुकजुरुक बनाउने खुल्लापत्र, अब के गर्लान् ? (पत्रसहित) – Online Marg
Posted on Thursday, January 30th, 2020 12:11 PM Saturday, February 1st, 2020 11:36 AM by अनलाइनमार्ग डट कम डेस्क
पछिल्लो समय चर्चा र विवादको केन्द्रमा रहेको अमेरिकी सहयोग एमसीसीबारे विभिन्न तह र तप्का फरक टिकाटिप्पणी भईरहेका छन् । कसैले एमसीको खुलेर समर्थन गरिरहेका छन् भने कसैले विरोध । यसैबीच, सूदुरपश्चिम प्रदेश धनगढीका ललित जोशीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई खुल्लापत्र नै लेखेका छन् ।
मिलेनियम(च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता मार्फत इण्डो–प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो सैन्य कार्यक्रममा सहमत गराउन हरसम्भव प्रयत्न गरिरहेको र त्यसप्रति सत्तासीन, सरकार समर्थक एवं प्रतिपक्षका समेत अधिकांश नेता नतमस्तक देखिनु देशका लागि ठूलो दुर्भाग्य रहेको मेरो ठहर छ ।
विशुद्ध अमेरिकी सैन्य कार्यक्रम रहेको एमसीसी सम्झौता हाम्रा वीरपुर्खाहरुले आर्ज्येको नेपालको राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताको बाधक र विरोधी भएको अटल मान्यतामा समस्त नेपाली जनता रहेको अवस्थामा सरकार र स्वयं सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएका सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू गम्भीर हुनु जरुरी देख्दछु ।
नेपाललाई आफ्नो सैन्य निगरानीमा राख्ने, दीर्घकालीन द्वन्द्वमा धकेल्ने, बाह्य हस्तक्षेपको क्रिडास्थल बनाउने, नयाँ उपनिवेशका रुपमा नेपाल राष्ट्रको गौरवमय वीरगाथा नामेट पार्ने अमेरिकी साम्राज्यवादी फौजी रणनीति अनुरुप अगाडि सारिएको एमसीसी सम्झौतालाई अस्विकार गर्न र जनभावनाको कदर गरी लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई अक्षुण्ण राख्न म सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू मार्फत नेपाल सरकार, प्रतिपक्षी दललगायतका सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति, आम देशभक्त नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, पेशाकर्मी, व्यवसायी, सञ्चारजगत र सम्पूर्ण नेपालीजनमा हार्दिक आव्हान गर्दछु। साथै, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सम्पूर्ण राजनीतिक दल र तिनका प्रतिनिधिहरुलाई उक्त सम्झौताको विरुद्ध मतदान गर्न जोडदार माग गर्दछु।
विगतमा पनि नेपालको बृहत हितको हवाला दिँदै गरिएका कोशी, गण्डक, र सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू कै सक्रिय संलग्नतामा गरिएको महाकाली सन्धि समेतले प्रचार गरिएको र अपेक्षाकृत सामान्य लाभ पनि नभएको र त्यसबाट नेपालको राष्ट्रियतामाथि आक्रमण भएको र नेपाली भूमिमाथि कब्जा भएको यथार्थ घाम जत्तिकै छर्लंग छ ।
तसर्थ, कोशी गण्डक र महाकाली सन्धिकै डिजाईन र रणनीतिमा अहिले एमसीसी लागू गराउने प्रपञ्चप्रति आम नेपाली नागरिकको चाहना र भावना बुझेर देशहितका खातिर यो फौजी कार्यक्रमलाई अनुमोदन नगर्नरनगराउन अभिभावकीय भूमिका निर्वहनका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू समक्ष यो खुल्लापत्र पेश गरेको छु ।
नेपाल आमाको जय होस्
‘देश बेच्न पाईदैंन नेता हो’ भन्दैं एमसीसीको विरोधमा बन्यो गीत, युट्युबमा तहल्का मच्चाउदैं ! (हेर्नुहोस् भिडियो)
पछिल्लो समय चर्चामा रहेको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीबारे विभिन्न टिकाटिप्पणी भईरहेका बेला यो सम्झौँताको विरोधमा एउटा म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । चर्चित गायक सौगात ओझा र टिका पुनको स्वर रहेको चाहिदैँन चाहिदैन हामीलाई एमसीसी चाहिदैँन, देश बेच्न पाईदैन बोलको गीत लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल युट्युबमार्फत सार्वजनिक भएको हो ।
गायक ओझाकै शब्दसंगीत रहेको उक्त गीतको एरेन्ज रमेश सेन्चुरीले गरेका छन् । कृष्णराज तिमिल्सिनाले खिचेको उक्त गीतको भिडियो प्रकाश एस.केले सम्पादन गरेका छन् । यो समाचार तयार पार्दासम्म उक्त गीतको भिडियोलाई करिब ५ हजार बढी पटक हेरिएको छ भने कमेन्टमार्फत आएका प्रतिक्रिया निकै सकारात्मक छन् ।
उक्त गीतको भिडियो गायक ओझाकै अफिसियल युट्युब च्यानलमा अपलोड गरिएको छ ।
एमसीसीको चर्चा र वास्तविकतास् नेपालमा के चाहन्छ अमेरिका ?
एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) सन् २००४ मा अमेरिकी संसदले स्थापना गरेको विकासशील देशहरुलाई ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्नमा सहयोग पुर्‍याउने एक साझेदारी संस्था हो । यसले हालसम्म विश्वका करिब ५० देशहरुमा आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । एमसीसी एउटा नवीन र स्वतन्त्र अमेरिकी सहयोगी नियोग भएकाले विश्वव्यापी गरिबी विरुद्धको लडाइँको अगुवाई गर्न सघाईरहेको बताईन्छ । नेपालमा अहिले चर्चामा रहेको एमसीसी अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर र नेपाल सरकारको १३ करोड डलर लगानी हुने एउटा कार्यक्रम हो । कृषि, सडक, ऊर्जा, बाटो र यातायात प्रमुख क्षेत्र रहेको यस कार्यक्रमले नेपालमा ४ सय केभीको विद्युत प्रसारण लाइन, तीनवटा सब स्टेसन र १०० कि.मि. सडक बनाउनुको साथै नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राविधिक सहयोग समेत उपलब्ध गराउनेछ ।
नेपालमा ५०० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ) को अनुदान इतिहासमा अहिलेसम्म आएको छैन । यो सम्झौता लागू भएको ५ बर्षमा झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि अनुदान दिने र सोही समयभित्र नेपाल सरकारले त्यस्ता पूर्वाधार विकासमा आफ्नो तर्फबाट झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै सम्झौता अनुसारको अधिकांश अनुदान झन्डै ४५ अर्ब रुपैयाँ विद्युतको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ भने बाँकी रकम सडक मर्मत र अन्य विषयमा खर्च हुने उल्लेख छ । यो आयोजनाको समयावधि पाँच बर्षको मात्रै भएकाले आयोजना निर्धा्िरत समयमा सम्पन्न हुन नसके अनुदान रकम फिर्ता जान्छ ।
सन् २००६ बाट औपचारिक शुरुवात भएको एमसीसी युएसएआईडीको भन्दा फरक ढंगले काम गर्ने र वैदेशिक सहायताको क्षेत्रमा कोशेढुंगा सावित होस् भनेर प्रारम्भ भएको बताईन्छ । यस योजना अनुसार सहयोग गर्दा अमेरिकाले सहयोग प्राप्त देशले आफ्नै जनतामा लगानी गरेका छन् कि छैनन् ? स्वास्थ्य, शिक्षामा कति खर्च गरिएको छ ? प्राकृतिक स्रोत साधनहरु संरक्षित छन् कि छैनन् ? बालबालिकालाई नियमित खोप दिएको छ छैन ? शिशु स्वास्थ्यको अवस्था के छ ? बालिकाहरुले प्राथमिक तह पार गरेका छन् कि छैनन् ? आर्थिक स्वतन्त्रताको अवस्था कस्तो छ ? उद्योग व्यवसाय गर्ने बन्देज, आर्थिक खुल्लापन र स्वतन्त्रता छ कि छैन ? वित्तीय नीति, मुद्रास्फिति, नियमनको गुणस्तर, आर्थिक गतिविधिमा महिलाहरुको सहभागिता, भूमि माथिको हक र पहुँच कस्तो छ ? शासन व्यवस्था विधिको शासन अनुसार चलेको छ कि छैन ? राजनीतिक अधिकार कस्तो छ ? सूचनाको हक र मौलिक हकको अवस्था के छ ? भ्रष्टाचार नियन्त्रणको स्थिती कस्तो छ भन्ने लगायतका मापदण्ड निर्धारण गर्ने गरेको बताईन्छ ।
अहिले एमसीसी मार्फत निर्माण हुन लागेको प्रसारण लाइनको निर्माण नेपाल, अमेरिका र भारतको सहकार्यको एउटा परियोजना हो । इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा मानव अधिकार र प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताको प्रवद्र्धन सीधै आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको अमेरिकी बुझाइ छ । विशेषतः कम्बोडिया, चीन, उत्तर कोरिया, लाओस, थाइल्यान्ड र भियतनाममा मानव अधिकार तथा नागरिक अधिकार संकटमा परेको भन्दै सो प्रवृत्ति अन्य मुलुकमा पनि बिस्तारै हुँदै जाने र आफ्नो मूल्य मान्यता यी क्षेत्रमा धरापमा पर्ने अमेरिकी विश्लेषण हो । त्यसैले अमेरिकी मूल्य र मान्यता विरुद्ध जाने मुलुकहरु विरुद्ध कूटनीतिक माध्यमले विभिन्न दबाब दिने अमेरिकी रणनीति छ । अर्कोतर्फ चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) बाट चनाखो भएको अमेरिका यो क्षेत्रको पुरानो शक्ति पनि हो । उसले धेरै देशलाई शीतयुद्धताका सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाएको थियो । त्यसैले चीनले नेपालभित्र के गरिरहेको छ भन्नेमा अमेरिकालाई चासो पक्कै छ । तर चीनले गर्नेखालको भौतिक पूर्वाधारमा लगानी र ऋण भन्दा अनुदानै आएपछि चीन पनि सशंकित हुन थालेको छ ।
उक्त सम्झौताको अनुसूची ५(क)मा नेपाल सरकारले एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तो योजनाले नयाँ बुटवल अन्तरसीमा गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको लागि आवश्यक प्रमुख वित्तीय तथा प्राविधिक कार्ययोजना र सोको परिचालनका लागि आवश्यक सिद्धान्त समेटेको हुनुपर्ने भनिएको छ । त्यस्तै सम्झौताको धारा ७ मा प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपश्चात् सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुने भनिएको छ । तर यसलाई अमेरिकाले भियना सन्धिको प्रावधान अनुसार उच्चस्तरीय राष्ट्रिय प्रतिबद्धता खोजेको बताएको छ । किनकी कुनै कानुनी अड्चनका कारण आयोजना प्रभावित भयो भने त्यति ठूलो अनुदान खेर जाने अमेरिकी भनाई छ । त्यसैले नेपालले छानेको आयोजनाका लागि ५० करोड डलर अनुदान पाँच बर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी आउनु भनेको नेपालकै हितमा हो भनी अर्थ लगाईएको छ ।
अर्कोतर्फ वर्तमान सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दल समेत एमसीसीलाई सदनबाट पास गर्ने तयारीमा जुटिरहेका बेला एमसीसीमा भएका विवादित बिषयहरुलाई स्पष्ट रुपमा सर्वसाधारण समक्ष प्रस्तुत गरी आवश्यक भएमा संशोधन सहित उक्त सम्झौता कार्यान्वयनमा जाँदा देशलाई फाइदा नै पुग्ने निश्चित छ भने यो विषयमा ठूलो हंगामा चलाउनु उपयुक्त हुँदैन । तर एमसीसीको कारण भविष्यमा मुलुक दुर्घटनामा पर्ने परिस्थिती छ भने यसलाई स्विकार गरिनु हुँदैन । त्यसैले एमसीसी नेपालको हितमा रहेको र यसले नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्‍याउने हो भने यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानु उचित होला । किनकी एमसीसी नेपालमा आर्थिक विकास गरी गरिबी कम गर्ने उद्देश्यले आउनु र विशुद्ध आर्थिक समृद्धिका लागि सहयोगका सम्बन्धमा मात्र केन्द्रित रहन सक्ने हो भने मुलुकको समृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउन सक्छ । (लेखक अधिवक्ता हुन्)